Askar Yahuud Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Naabulis. – Calamada.com
Askar Yahuud Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Naabulis.
calamada March 3, 2016 1 min read
Labo Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Meliteriga Yahuudda ayaa dhaawacmay markii dhallinyaro Filastiniyiin ah ay ku weereen deegaanka lagu magacaabo Jazriim ee kuyaalla Koonfurta magaalada Naabulis ee dhulka la heysto ee Filastiin.
Warbaahinta Sahyuuniyadda ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay habeenimadii Arbacada, waxaana dhaawaca soo gaaray mid ka mid ah labada Askari lagu sheegay inuu yahay mid dhex-dhexaad ah, iyadoona ay baxsadeen laba ruux oo looga shakisanyahay inay weerarkaas fuliyeen.
Ciidamo badan oo ka tirsan Booliiska Yahuudda ayaa lasoo dhoobay goobta uu falku ka dhacay, waxayna halkaas ka billaabeen howl-gallo ay ku baadi goobayaan raggii weerarkaasi ka dambeeyay.
War kasoo baxay Ciidamada Ammaanka ayaa waxay ugu baaqeen dadka ku nool Koonfurta magaalada Naabulis inay guryahooda ku sugnaadaan inta ay howl-galladaasi socdaan.
Dhanka kalena Askari Yahuudi ah ayaa ku dhaawacmay howl-gal kaligii-duulnimo ah oo ka dhacay meel ku dhow tuulada Al-Cawajah ee dhacda duleedka magaalada Ariixa ee daanta galbeed ee dhulka Filastiin.
Ciidamada Gumeysiga Sahyuuniyadda waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen haweeney Filastiiniyad ah oo looga shakisanyahay inay weerarkaas fulisay.
Tan iyo bishii October ee Sannadkii hore waxaa deegaannada kuyaalla Daanta galbeed iyo Jiidda Gaza ee dhulalka Filastiiniyiinta ka soconaya kacdoon dadweyne oo ay wadaan Shacabka Filastiniyiinta ah ee dhulkaas ku nool, iyagoona qaadaya weerarro kaligii-duulinimo ah oo ay ku beegsanayaan dadka Yahuudda ah ee dhulkaas xoogga lagu dejiyay.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 23-05-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 24-05-1437 Hijri.
1 thought on “Askar Yahuud Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Naabulis.”
wan ku faraxsanay in yahuuda dhibaato la soo gaarsiiiyo maaadama ay yihiin cadawga muslimiinta allahu akbar.